The Most Beautiful Lakes In Northern Italy | Gcina A Isitimela
ekhaya > Uloliwe kuhambo Italy > The Most Beautiful Lakes In Northern Italy
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 06/02/2021)
Nabanye oololiwe fastest eYurophu yaye uninzi imizila ebukekayo, Ukuhamba Eyona Beautiful Lakes e Northern Italy ngololiwe ngokoqoqosho, ukhululekile, kwaye ngqo, benikela siqonde impilo bendawo, amaninzi kunye nemibono ezinkulu aphoswe isivumelwano.
Nentwana unekhono umzila-ucwangciso kunye nomongo schedule, ungakwazi kakhulu ngokulula ndadibanisa i hambo oluya kwenza i uhambo kanye njengokuba Nakuba le indawo ekuyiwa kuyo.
Ukutyelela Northern Italy
Njengokuba amazwe, ElamaTaliyane eyakho North-South ukwahlulwa kwayo eMntla abavela kuye ukuqhayisa ukuba ibe lomqolo zelizwe zoqoqosho usomandla mveliso.
Ukusuka izibuko shofar ekutyeni, imimandla yomntla Italy ka-akhawunti iminyaka engaphezu 50% yoqoqosho Italian ... nangona eziqulethe ngaphantsi kwesiqingatha senani labemi beli lizwe!
the 8 kwiingingqi ezi:
Ngenxa parameter entabeni, emachibini amahlanu amanzi, iinduli agiqekayo, namachweba akhulayo, kukho ezininzi elinezinto North Italy, ngisho imigama emifutshane. Ungaqala iveki yakho yokushibilika kwiDolomites, laze ngayo Lake Tsomo futhi siphele uhambo sisitya yoKutya kwaselwandle e Cinque Terre!
Abantu abakhetha fashion kunye nokutya bendingedaniyo mhlawumbi. imizi-enophahla Red ezifana Bologna abantu ebekade ingqalelo Italy emzini ezizwe ube kanti Parma ngaphandle abalimi-class lehlabathi prosciutto kunye Parmesan.
ke, kanjalo, zimbini izixeko ezidumileyo zaseMilan kunye Venice ukufumanisa kwi North of Italy! Bengandithembi xa ndithi, zonke otyelele apho uya kufumana into ukuthanda apha.
Kuba lula kakhulu, kufuneke u ukuqasha imoto xa uhamba ukubona Lakes ezahlukeneyo in Northern Italy. Ukuba ufuna ukuba uthembele esidlangalaleni zokuhamba, siyafuna doable.
Amachibi e Northern Italy – Lake Como
Chaza Lake Como nakubani kwaye amathuba, amehlo abo ukhanyisela kwaye baya kuthi "George Clooney!"
Lake Como, kwaziwa njenge Lario, Yeyona ndawo yesithathu ngobukhulu kumachibi eMantla eItali, kunye nobunzulu eliphezulu malunga 410 mitha (448 iiyadi), Kwakhona enye amachibi zinzulu eYurophu.
fast Inyaniso: Ubusazi, Its ubume beempawu, sifunda i wakhona Y, iziphumo ezivela ukunyibilika komkhenkce idityaniswe intshukumo ilunga le Adda Umlanjana. Oku kwakhokelela ekubeni ekubunjweni kwamasebe amabini Southern, phakathi apho kukho ihlabathi ethandwa Bellagio.
Sise emazantsi Alps, Lake Como inikezela omnye kakhulu elihle censorious emhlabeni. Ukuba uza kutyelela amachibi Italian, uya kumangaliswa ukuba bafunde izinto ezininzi ukuyenza Lake Tsomo ngaphandle celebrity amabala!
Ngaphandle yokuba ukuya ku Northern Italy ngu Train yi no-brainer, siza bavume hitching ukukhwela isikhephe opholileyo entle kakhulu. Ingakumbi xa ufuna amava Lake Como ngakumbi okusemandleni alo.
Nokuba wena ukutyelela Lake Como usuku okanye ukuhlala ixesha elide, ukutsiba wakhwela isikhephe, bakhululeke kwaye ufikelele kwidolophu yakho oyithandayo: Bellagio, Varenna, njengoko, okanye mhlawumbi omnye Villas zembali kunxweme kwedike.
Lake Garda yenye Lakes ezinkulu Northern Italy kwaye sikhulu kweli chibi glacial amachibi Italy amahlanu, bondliwa yi Alps kule ngasentla. North of Verona, Lake Garda lusapho kakhulu – kunye namanzi wezemidlalo-ogxile of Italy amachibi. Kwakhona Italy ngobukhulu, efikelela kwi eentaba esiluhlaza eweni ukuya kwikona yomntla Po Valley.
Nakumzantsi wonxweme igcwele yi zokuqubha kunye esekelwa iinduli eliphantsi. Ngoxa ngasentla, ezintabeni namawa wodwa umphetho chibi, ikakhulu ecaleni entshonalanga usebe. kwendawo yayo unika elwandle a undinzi olugcwele ezinika ngemidlalo-onothando abakhenkethi. Ukususela imimoya ngokuthe ngcembe ngesikhephe windsurfing ukuya ezintabeni zokugwencela, rappelling, kunye entabeni ngesithuthuthu, bonke baneembono chibi.
kuziindaba ngcono. Lake Garda indawo ulunika unyaka-ngeenxa zonke sezulu apho yeminquma kunye lemons zikhule kakuhle emantla kuluhlu yazo yesiqhelo. Perfect kwezinye kwemini G&T! Faka sandy elide esimhlophe kwaye bamba kwiidolophu kunye inala malanga iimbono. Namkela ngokwakho ogqibeleleyo iholide indawo ekuyiwa kuyo!
Ngoko ngaba uziva njani kufana ukwenza uza kubona ezinye Lakes in Northern Italy? Ufuna ukugcina ixesha nemali lo gama Ukuya Northern Italy ngololiwe? Incwadi zonke Amatikiti yakho uloliwe usebenzisa Gcina A Isitimela ngemizuzu, kungekho ntlawulo ezifihlakeleyo!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/beautiful-lakes-northern-italy/- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / ja ku / okanye / ts kwiilwimi ezininzi.
#Ichibi #echibini #LakeComo #LakeGarda #NorthItalyTravel northitaly NorthItalylakes